मेयर भन्छन् : उपमहानगर पूर्वाग्रही छैन, सडक बिस्तार ८२ नै कायम हुन्छ (कुराकानी) - Purbeli News
मेयर भन्छन् : उपमहानगर पूर्वाग्रही छैन, सडक बिस्तार ८२ नै कायम हुन्छ (कुराकानी)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र २६, २०७५ समय: १३:४७:५२
इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने आफ्नो सडकलाई फराकिलो बनाउने अभियान द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको छ । भदौ २० देखि सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको सिमा बुढी खोलादेखि शुरु गरिएको अभियान अहिले पश्चिम कलंकी चौकसम्म पुगेको छ । ६ दिन यता सडक अतिक्रमण गरि बनाइएका पेटी, टहरा, पर्खाल आदी जस्ता भौतिक संरचना डोजर लगाएर भत्काइएको छ भने सडक आसपास थुपारिएका निर्माण सामाग्री, ग्यारेज तथा घुम्ती पसलहरु समेत हटाइएको छ ।
बुढी खोलादेखि कंलकीसम्म यो अभियान चल्दा इटहरीका धेरैले उपमहानगरको प्रशंसा समेत गरेका छन् । उपमहानगरको यस अभियानले इटहरीको सौन्दर्यता बढ्नुको साथै सडक फराकिलो बनेको इटहरीवासीको बुझाई छ । तर यसको कार्यन्वय कतिको हुने हो भन्ने शंका पनि गर्ने गरेका छन् । किनभने उपमहानगरले यस अघि ल्याइएको धेरै अभियान बिच बाटोमै अड्किए छन् ।
उपमहानगरका मेयर द्धवारिकलाल चौधरीले शुरुवाती चरणमा ऐलनी जग्गाको संरक्षण गर्ने देखि खोला–नाला अतिक्रमण हटाउने अभियानको बिच बाटोमै ब्रेक लाग्यो । अहिले भने सडक फराकिलो बनाउने अभियानले कतिको पूर्णता पाउने हो त भन्ने इटहरीवासीको जिज्ञासालाई पूर्वेली न्यूजसँग मेयर द्धवारिकलाल चौधरीले यसरी मेटाए ।
सडक फराकिलो बनाउने अभियान कहाँसम्म पुग्यो ?
२० गते बुढी खोलादेखि शुरुवात भएको अभियान अहिले पश्चिम ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पुगेको छ । पश्चिम रामधुनि नगरपालिकाको सिमाना जाल्पा पेट्रोलसम्म अभियान चल्नेछ । त्यस पछि हामी कोशी राजमार्गको दुहबी सिमाना र धरान सिमानासम्म पनि अभियान चल्ने छ ।
सडक फराकिलो बनाउन किन आवश्यक ?
अनाधिकृत ठंगले सडक क्षेत्र मिचेर व्यक्तिहरुले संरचना बनाएका हुन । सडक अधिकारी क्षेत्र २५ मिटर र ६ मिटर सेडब्याक भनिएको छ । उपमहानगरले यो अभियान नथाल्दा सडक आवगमनमा समस्या, पार्किङ अभाव, घर अगाडीको भाग सडक पेटी भन्दा अग्लो बनाउदा शहर नै कुरुप बनेपछि अभियान थाल्न अति आवश्यक देखिएको हो । मुलत सडक सौन्दर्य कायम राख्न सडक अधिकार क्षेत्र भित्रको अतिक्रमण क्लियर गर्न खोजेका हौ ।
कहिलेसम्म इटहरीका सडक पूर्ण रुपमा फराकिलो देख्न सक्छौ ?
मंगलबार सम्म ६ दिन बित्यो । काम द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । हामीले १० दिन भित्र सक्छौ भनेका थियौ सडक अतिक्रमण धेरै भएकाले भत्काउदै गर्दा १५ दिन लाग्न सक्छ । सडक अतिक्रमण ऐन भन्दा हामी सबैको सहमतिमा सडक क्लियर गदैछौ ।
सडक अतिक्रमण ऐनमा के छ ?
ऐनमा सडक अतिक्रमण जसले गरेमा उसैबाट त्यसको जरिमाना उठाउने र कारबार्ही गर्ने अधिकार छ । तर हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधी हौ, पहिलो चरणमा ७ दिने सुचना जारी गरयौ त्यसपछि अभियान शुरु गरेका थियौ । बिचमा धेरैले अटेर गरिरहेका छन् उनिहरुलाई हामीले सम्झाएका छौ । यदी नमाने डबल जरिमाना पनि उठाउछौ र कारबार्ही पनि । हामीले सडक डिभिजनको काम गरिरहेका छौ, वास्तवमा यो काम उनिहरुले गर्ने हो । जनतालाई असर नपर्ने गरि हामीले उपमहानगरकै खर्चमा काम गरेका हौ । ऐनमा कसैले सडक अतिक्रमण गरि संरचना बनाएर ५ देखि ६ लाखसम्म जरिमाना लिने प्राबधान छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले थालेको काम बिचमै ब्रेक लाग्ने गर्छ । ऐलनी जग्गा संरक्षणदेखि खोला नाला अतिक्रमण हटाउने कामको निरन्तर्ता नहुदा तपाईमाथि शंका गर्न थालेका छन् । यो अभियान पनि बिचमै अड्किने त हैन ?
शंका गर्नु काम गरेन भनेर आरोप लगाउनु सामान्य कुरा हो । हामीले गरेको काम परिपक्क हुनु पर्यो । बिधि र कानुन संम्बत हुनुपर्यो । यसको लागी बृहत इटहरीको सहमति निर्माण पनि गर्नुपर्छ । हामीले काम गर्दा अनावश्यक कुनै व्यक्तिको क्षति नहोस भन्ने ध्यान दिनुपर्छ । इटहरीको बिकास निर्माणमा उपमहानगरपालिका सदैव दृठ संकल्प छ । हामीले अहिले गरेको काम १० बर्ष अघिदेखि नै थालनि भएको थियो । यसको निरन्तर्ता भएको हो, हामी अनुगमन पनि गर्नेछौ । यो अभियान काहीकतै रोकिनेवाला छैन ।
सडक फराकिलो बनाउदा ‘पावर’ प्रयोग गर्नेहरुको संरचना भत्किएन पनि भन्छन् ?
अहिले हामीले अस्थाई संरचना मात्र भत्काउन थालेका छौ । सडक अतिक्रमणमा ठुलाठुला भौतिक संरचना पछि छन् । त्यो काम सडकले गरोस भन्ने हो । हामीले पूर्वाग्रही नराखि काम गरिरहेका छौ । केही व्यवसायीहरु डेलिगेसन पनि आउनु भएको थियो । उपमहानगरपालिकाले कसैको अनुहार हेरेको छैन । कसैको डोजर नै प्रयोग गर्दा थप क्षति हुने भएका ठाँउमा हामीले छोटो समय दिएका हौ । कागज भरपाई गरेर नै समय दिएका छौ ।
६ लेनको सडक बिस्तार इटहरीमा आएर अड्कियो । उपमहानगरपालिकाले ५५ फिट कायम गर्नुपर्छ भन्ने बिषयको बिरोध पनि भयो । अब ५५ कि साडे ८२ फिट काट्ने हो इटहरी ?
इटहरी उपमहानगरले ५५ कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गलत प्रचार हो । प्रमुख भएको नाताले यो कुरामा आधिकारिक्ता छैन । हामीले रानी–धरान लोकमार्गको प्रमुखसँग छलफल गरिरहेका छौ । ६ लेन निर्माणको काम अब शुरु हुदै पनि छ । यो बिषयमा इटहरी मुख्य चौकका व्यवसायीहरु आएर ५५ फिट बढी काट्ने हो भने, क्षतिपूर्तीको माग गरिएको थियो । यसमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले आएका मागको ध्यानाकर्षण मात्र गरेको हो । पछि त यसलाई डिजाईन गरेर हामीलाई गलत बनाइयो ।
भनेपछि साडे ८२ नै क्लियर हुन्छ अब ?
अहिले ८२ नै कायम हुन्छ । त्यसको लागी उपमहानगर अबरोध हुनेछैन ।